RASMI: Kooxda Manchester City oo bixisay lacagaha rikoorka ah ee lagu burburin karay heshiiska Rodri – Gool FM
RASMI: Kooxda Manchester City oo bixisay lacagaha rikoorka ah ee lagu burburin karay heshiiska Rodri
(Manchester) 03 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa qarka u saaran inay la saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain iyo naadiga Atletico Madrid ee Rodri.
Man City ayaa bixisay lacagaha rikoorka ah ee lagu burburin karay heshiiska ciyaaryahan Rodri taasoo dhan 62.6 milyan oo gini sida ay shaacisay kooxda ka dheesha horyaalka La Liga.
Atletico waxa ay sheegtay in qareennada ciyaaryahanka iyo wakiillo ka socda Man City ay kulmeen maanta oo Arbaco ah, isla markaana ay kooxda reer Spain siiyeen lacagaha lagu burburin karo heshiiska ciyaaryahankan.
Sidaas darteed 23’sano jirkaan Rodri ayaa heshiiskiisa kooxda Atletico Madrid la kansalay ama la burburiyey kaasoo soconayey illaa bisha June sanadka 2023-ka.
Waxaa rikoorka ciyaaryahanka ay kooxda Man City lacagaha ugu badan ku soo iibsatay horay u haystay ciyaaryahan Riyad Mahrez oo ay 60 milyan oo gini kula soo wareegeen sanadkii 2018.
Rodri ayaa ku soo biiray kooxda Atletico bishii May sanadkii 2018 kaddib markii ay kaga soo qaateen heshiis saddex sanadood ah naadiga Villarreal, waxaana uu u saftay Atletico 34 kulan oo horyaalka ah taasoo ka dhigan inay ku dhammaysteen xilli ciyaareedkii hore kaalinta labaad ee kala sarreynta La Liga.
Waxa uu saftay kulankiisii ugu horreeyey ee heer caalami ama uu dalkiisa u ciyaaray kulan saaxiibtinnimo oo ay ka horjeedeen Germany sanadkii hore, waxaana uu xulkiisa waa weyn ee qaranka Spain u ciyaaray lix kulan.
Man City ayuu Rodri u ahaa mid ka mid ah bartilmaameedyadeeda ugu weyn suuqa xagaagan, iyadoo tababare Pep Guardiola uu qorsheynayey inuu la saxiixdo xiddiggan khadka dhexe ee difaaca oo uu ku xoojisto shaxdiisa kooxda xafidanaysa horyaalka Premier League ee Sky Blue.
Waakee ciyaaryahanka ku sugan kooxda Juventus uu si xoogan u doonayo Pep Guardiola inuu shaqaaleysiiyo?